Pep Guardiola oo aqbalay eedeymo loo soo jeediyay - BBC News Somali
Tababaraha kooxda Manchester City, Pep Guardiola ayaa aqbalay eedeyn ay usoo jeediyeen guddiga xiriirka kubadda cagta Britain ee FA, kaasi oo ahaa inuu ku kacay arrimo siyaasadeed, kadib markii Guardiola uu dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu xirnaa calaamad jaala ah, taasi oo muujineysa sida uu uga xunyahay qaabka dowladda Spain ay ula dhaqantay dadkii u ololeynayay madaxbanaanida gobolka Catalonia ee uu kasoo jeedo.
FA ayaa sheegtay in Guardiola loo qabtay muddo cayiman, si uu uga jawaabo eedeymaha loo soo jeediyay, waxaana ay shegeen in tallaabada uu ku dhaqaaqay Guardiola ay xadgudub ku tahay shuruucda u taala guddiga.
Pep Guardiola ayaa bishii Nofembar ee sannadkii hore sheegay in sababta uu u xirto calaamada jaalaha ay tahay inuu taageersanyahay siyaasiyiinta Catalonia ee ay dowladda Spain xabsiga dhigtay. Guddiga xiriirka kubadda cagta ee Britain, FA ayaa lagu wadaa inay dhageystaan dacwadda loo heysto Guardiola.
FA ayaa dhowr jeer oo hore arrintan uga digtay tababaraha kooxda Man City.
Jordi Cuixart iyo Jordi Sanchez oo aad ugu ololeynayay madaxbanaanida gobolka Catalonia ayaa loo taxaabay xabsiga, kadib aftidii bishii oktoobar ka dhacday halkaasi, taasi oo ay dowladda Spain ku tilmaamtay mid sharci darro ah.